स्वराज र प्रचण्डबीच भेटवार्ता शुरु, के बिषयमा हुँदैछ छलफल ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
स्वराज र प्रचण्डबीच भेटवार्ता शुरु, के बिषयमा हुँदैछ छलफल ?
काठमाडौँ – भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता सुरु भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड र भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजबीच होटल सोल्टीमा वार्ता सुरु भएको हो ।
भेटमा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको पनि सहभागिता रहेको छ । स्वराजले आज राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसअघि स्वराजले प्रचण्डसंग भेटेकी हुन् ।
यसअघि, हिजो विदेशमन्त्री स्वराजले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग होटल सोल्टीमा करिब पौने घन्टा भेटवार्ता गरेकी थिइन । एक्ला एक्लै वार्तापछि दुई पक्षबीच सामूहिक वार्ता भएको थियो ।
भेटमा एमालेकातर्फबाट एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल, नेताहरु सुवास नेम्बाङ, विष्णु पौडेल, प्रदिप ज्ञवाली लगायतका नेता सहभागि थिए ।